Ka Xayuubiya Kabtanimada Harry Maguire...Calaamada Kabtanimada U Gacan Galiya..... Jamaahiirta Man United Oo Cadhadooda Soo Bandhigay. - Gool24.Net
Ka Xayuubiya Kabtanimada Harry Maguire…Calaamada Kabtanimada U Gacan Galiya….. Jamaahiirta Man United Oo Cadhadooda Soo Bandhigay.
Kabtanka kooxda Manchester United ee Harry Maguire ayaa wali xabsi ugu jira dhacdo isaga iyo asxaabtiisu ka gaysteen dalka Giriiga wuxuuna qareenka xidigani sheegay in barri damaanad lagu soo dayn doono.
Laakiin jamaahiirta Manchester United oo wali Harry Maguire ugu cadhaysan qaladaadkii kulankii Europa League ee Sevilla oo ay u raacday arinta uu xabsiga u galay ayaa markiiba dalbaday in calaamada kabtanimada United laga xayuubiyo xidigan reer England.
Jamaahiirta Man United ayaa dalbaday in Bruno Fernandes laga dhigo kabtanka cusub ee kooxdooda inkasta oo aanu kooxda joogin muddo sanad ah kadib markii uu Old Trafford soo gaadhay bishii January ee horaantii sanadkan.
Taageerayaasha Man United oo markii horeba Harry Maguire ugu cadhaysnaa qaladkii waalida ahaa ee goolkii kowaad ee Sevilla ayaa dhaqan xumada lagu soo eedeeyay ee ah in uu la dabaalamay booliiska dalka Giriiga waxay keentay in ay dalbadaan in caalamada kabtanimada laga qaado.
Harry Maguire ayaa kabtanka Manchester United laga dhigay isaga oo waqti badan kooxda joogo kadib markii uu lacagtii abid ugu badnayd kaga soo wareegay kooxda Leicester City balse waxa uu hadda u muuqdaa mid lumiyay taageerada in badan oo jamaahiirta United ah.
Haddii aan soo qaadano qaar ka mid ah taageerayaasha Man United ee dalbaday in calaamada kabtanimada kooxdooda laga qaado Harry Maguire isla markaana loo dhiibo Bruno Fernandes ayaad halkan kaga bogan kartaan.
Taageere Man United ah ayaa soo qoray: “Calaamada kabtanimada ka xayuubiya Maguire isla markaana u gacan galiya Bruno, muxuu naftiisa u difaacayaa ee aanu kooxda u difaacayn”. wuxuuna taageerahan tix raacayaa dagaalka uu Maguire la galay boosliiska Giriiga iyo difaacashadii liidatay ee uu sameeyay kulankii Sevilla.
Taageere kale ayaa soo qoray: “Haddii uu Maguire sii wato calaamada kabtanimada taas kadib anigu wax kalmado ma heli doono. U gacan galiya Bruno”.
Taageere kale oo la fikir ah ayaa soo qoray: ” Waxay u muuqataa in Harry Maguire uu khasaare ku yahay garoonka dhexdiisa iyo banaankiisaba. Ka qaada calaamada kabtanimada isaga oo siiya Bruno”.
“Haddii kabtanimada laga xayuubiyo Maguire, waxa kaliya ee aan doonayaa waa in aan arko Bruno Fernandes oo xidhan calaamada kabtanimada, ma aha qof kale”. ayuu taageere kale soo qoray;
Taageere kale ayaa hadalka soo gaabiyay wuxuuna soo qoray: “Waxaa hadda kabtanka noqon doona Bruno” laakiin taageere kale ayaa xal kale sameeyay wuxuuna soo qoray: “Waa xal sahlan, Bruno waa kabtanka, Pogba waa kabtan ku xigeenka”.
Fariimo kale oo aad u badan ayay taageerayaasha Man United ku dalbadeen in Harry Maguire laga qaado calaamada kabtanimada kooxdooda isla markaana lagu wareejiyo Bruno Fernandes oo gabi ahaanba kooxdooda dhawr bilood ku badalay.